Daawo: Rooble oo lagu soo dhoweeyey Qaahira iyo war laga soo saaray safarkiisa - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Rooble oo lagu soo dhoweeyey Qaahira iyo war laga soo saaray...
Daawo: Rooble oo lagu soo dhoweeyey Qaahira iyo war laga soo saaray safarkiisa
Qahira (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar, kadib markii uu saakay ka duulay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa waxaa si diirran ugu soo dhaweeyey Garoonka Qaahira International dhiggiisa dalkaas Mustafa Madbuuli iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Masar.
Ra’iisul Wasaare Rooble iyo wafdigiisa ayaa ku tagay dalka Masar booqasho rasmi ah oo ku saleysan xoojinta xiriirka soo jireenka ah iyo iskaashiga labada dale e Masar iyo Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalka Masar Cabdulfitaax Al-sisi, waxayna labada dhinac yeelan doonaan kulammo ay uga wadaxaajoo doonaan arrimaha khuseeya xiriirka labada dal.
Ra’iisul Wasaare Rooble waxaa safarkaan ku wehlinaya wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirisaaq, wasiirka waxbarashada, Cabdullaahi Abuukar Xaaji iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan goleyaasha dowladda.
Socdaalka Ra’iisul Wasaaraha ee dalka Masar ayaa qaadan doona mudo laba cisho ah, waxaana ka warbixiyay safiirka Masar ee Soomaaliya Ilyaas Cumar Abuukabar.
Hoos ka daawo sida Qahira loogu soo dhaweeyey wafdiga Rooble